BPS/Degmada (Jaatarka Horace Mann)9aad - 12aad
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 9:00am-2:45pm
Lambarka Taleefanka 617-635-6789
Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Wac 617-635-6789, ext. 102 for details on the application process.
Boston Day and Evening Academy waxay u adeegta ardayda da' ahaan kawayn dugsiga sare, ee dhibaato ku qabay arrimaha ka qaybgalka, dib loogu celiyay fasalka sideedaad, oo dareemo inaysan helaynin taxadar fasalka ee ay ugu baahanyihiin inay ku guuleystaan, ama ka baxay laakin rabaan inay ku laabtaan dugsiga si loo helo dibloomadooda.
Boston Day and Evening Academy wuxuu udiyaariyaa ardayda dugsiga kadib dhacay waxbarashadooda asagoo udiyaarsha siday uga qalin jabin lahaayeen dugsiga sare, guushooda dugsiga sare kadib iyo inay si macno leh ugu diyaar garoobaan bulshadooda.
Casharo kudhisan karti: ardayda ayaa qalin jabin kara mid kamid ah afarta xafladood ee laqabto sanad kasta.
Dareen qaas ah oo lasiinaayo ardayda oo dhan, oo ay lajiraan barnaamijyo taageero iyo aqoon siinaaya ardayda, tirada macalimiinta iyo ardayda oo aad iskugu dhaw, adeegyada taageerada ardayda ee xili kasta, iyo talosiinta ardayda.
Jawiga firfircoon ee ardayda aanan kala kulmin guusha dugsiyada kale.
Barashada Shaybaarka waxay shaqeeyaan wakhti buuxo ee lagu caawinayo ardayda inay la qabsadaan shaqada laga tagay ama xoojiyaa barashadooda ee ka baxsan fasalka.
Koorsooyinka kuleejka iyo xirfadaha (barnaamijka shaqo barashada iyo kobcinta) ayaa ardayda loodhigaa asbuucii oo dhan.
Taageerada iskuxirka adag ee gurigga iyo dugsiga ayadoo la adeegsanaayo kooxda talobixinta iyo taageerada ardayda.
Xoogsaarida wakaalada ardayga, ayna kujiraan in ardaydu qaataan masuuliyada waxbarashadooda iyo kobacooda shaqsiga ah.
Xarunta Qorshaynta Qalin Jabinta kadib taasoo ardayda kutaxaluqda markay iskadiiwaangalinayaa qorshaynta nolosha dugsiga sare kadib.
Iskaashi xoog badan oo nagala dhaxeeya ururada farshaxanka iyo bulshada kuwaasoo gacan kagaysta kataageerida ardayda dhanka waxbarashada iyo dabeecadaha guusha.
Dugsiga dhan ayaa diirada saara xariiro xoog baan oo ardayda lala sameeyo iyo in ladhagaysto “codka” ardayga.
Dhaqan iyo Jawi leh taageero, dareen lasiiyo naxdinta, qadarin, soodhawayn, kumashquulid la'aan, iyo farxad.
Balaarinta deegyada taageerada ardayda
Wuxuu dugsigu taqasus uleyahay lashaqaynta ardayda da'da dugsiga kawayn.
Ardayda ayaa beera lago beerood oo beeraha nadiifta ah ee magaalada
20 oo kamid ah24